Abuu Dar Al Qifaari “Asxaabigii Soo Islaamiyay Tolkiisa oo dhan” | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	6:48 pm » Amaro adag oo markii ugu horeysay lagu soo rogay Magaalada Kismaayo (Aqriso) 5:56 pm » Dowladda Somaliya oo markii ugu horeysay ogaatay halkii laga soo tuuray madaafiicdii lagu weeraray Madaxtooyada 5:48 pm » Dowladda Australia oo sheegtay inay xiiseyneyso Deegaanada Puntland “Daawo Sawirada” 12:02 pm » Ciidamada Amisom oo ka qeyb qaatay hawlgal qorsheysan oo laga fuliyay meelo gaar ah, oo lagu soo qab qabtay niman Shabaab ah 11:53 am » Gabar ka tirsan Ciidamada Dowladda oo hal askari qaarajisay, iyadoo mid kalana dhaawacday 10:09 am » Banaanbax cajiib ah oo maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho 9:15 am » Wararkii ugu dambeeyay xiisadii ka dhex aloosneyd Maamulka Gobolka Baay ee Dowladda 9:07 am » Dagaalo khasaaro badan geystay oo ka dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose 8:58 am » Amaro lagu soo rogay Magaalada Baladweyne, si khatarta Al Shabaab looga hortaggo 8:52 am » Al Shabaab oo sheegtay in shan askari oo kamid ah Ciidamada Amisom ay ku dishay Villa Somalia By: Mastar // Aug 11 2012 at 3:34 am // 687 Reads // Wararka Somalia Abuu Dar Al Qifaari “Asxaabigii Soo Islaamiyay Tolkiisa oo dhan” Share Tweet
Togga lagu magacaabo �WADDAAN� ayeey degganaayeen qabiilka reer Qhifaar. Xoogaaga ay u soo tuuraan socotada qureysh ee u kala goosha magaalooyinka Shaam iyo Xijaaz ayeey ku noolaayeen. Mararka qaarkood waxaa dhacda inay si awood leh ay cuntada uga qaataan, waa haddii aynan siinin markaas waxay doonayeen.
Wuxuu u hanqal-taagayay inuu soo baxo Nebi cusub oo buuxiya dadka laabtooda, isla markaasna ka saara dadka mugdiyada iyo baadida ay ku sugan yihiin, una saara iftiinka iyo nuurka xaqa ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa maalintii danbe Abuu Dar soo gaaray �isagoo ku sugan miyiga- wararka sheegaya Nebiga cusub ee ka soo bixi doona magaallada Makka. Abuu Dar oo doonaya inuu ka sal gaaro warkaas ayaa wuxuu ku yiri walaalkiis Aniis hadalladan �Aniisow waxaad u kicitintaa Makka, oo waxaad is-dul-is-taagtaa wararka sheegaya ninka lagu sheegay inuu yahay Nebi, oo xagga samadana looga waxyoonayo. Hadalladiisa bal noo soo dhageyso, dabadeedna iila imoow wuxuu sheegayo�.
Aniis wuxuu ku yiri Abuu Dar �walaahi waxaan soo arkay nin dadka ugu yeeraya akhlaaqda suubban, isla markaasna ku hadlaya hadallo aan ahayn sixir�. Abuu Dar ayaa weydiiyay Aniis �dadku maxay lahaayeen?�. Aniis ayaa ugu jawaabay �waxay lahaayeen waa sixiroole, faalalow iyo gabyaa�.
Markii la gaaray habeenkii, wuxuu Abuu Dar u diyaar garoobay inuu seexdo masjidka. Iyadoo uu Abuu Dar ku sugan yahay masjidka ayaa waxaa soo ag maray Cali Bin Abii Daalib Allaha ka raalli noqdee, wuxuuna gartay inuu yahay qariib ama marti. Cali ayaa ku yiri Abuu Dar � ninyahoow kaalay oo i soo raac�, sidiina ayuu Abuu Dar ugu raacay Cali gurigiisa. Markii la gaaray subixii, wuxuu Abuu Dar soo qaatay sibraarkii iyo oleygii ama qandigii uu horey u watay, wuxuuna ku soo laabtay masjidka, iyagoo aan is wareysan.
Wixii intaa ka danbeeyay, wuxuu Abuu Dar negaa miyiga, jeer laga soo gaaro dagaalkii Badr, Uxud iyo Khandaq. Intaa ka dib, wuxuu ku soo laabtay magaallada Madiina, wuxuuna u go�ay la-jirka Rasuulka (scw), isagoo weydiistayna inuu u istaago adeegga iyo khidmada Rasuulka (scw). Rasuulka (scw) si kal iyo laab ah ayuu uga oggolaado codsigii Abuu Dar, wuuna ku liibaanay khidmadiisa iyo adeeggiisa.
Abuu Dar si wacan ayuu u xasuusan jiray dardaarankaas uu siiyay macalinkiisii weynaa ee isaga wax baray, oo seeftiisa weligiis ulama bixin mid ka mid ah madaxda muslimiinta. Hase ahaatee, waxaa hubanti ah in uusan ka aamusin marnaba qaladaadkooda ay samaynayeen. Maxaa yeelay wuxuu ogaa in ay furan tahay waddada wax-sheegga iyo nasteexada. Sidaan horey ugu sheegnay, maadaama aynan jirin qaladaad iyo khilaaf sidaas u sii weyn muddadii khilaafada Abuubakar iyo Cumar, laakiin muddadii khilaafada Cusmaan ayaa wuxuu Abuu Dar oo markaas joogay Shaam uu arkay inay muslimiintii si ba’an u qaabileen dhaldhalaalka adduunyada iyo iyagoo ku mashquulay raaxaysiga adduunyada, taasoo isaga ku qasabtay inuu si daran isu hortaago, dadkana ugu yeero ka foggaanshaha fidnada adduunyada.
Madaxdii xukumaysay Shaam ayaa dhibsaday dhaqdhaqaaqa uu wado Abuu Dar. Mucaawiya Binu Abii Sufyaan oo xilligaas xukumayay Dimishiq iyo Abuu Dar ayaa waxaa dhex martay dood aad u kulul (ka aqri kutubta siirada ee ay qoreen culumada islaamka. Qodobbadii uu Abuu Dar kala doodayay Mucaawiye ayaa ka mid ahaa guryihii uu ku lahaa Shaam iyo guriga uu ku lahaa Makka iyo halka uu ka helay hantidaas. “soow ma tihidiin dadkii joogay markii uu qur’aanka ku soo degayay Rasuulka (scw)” ayuu Abuu Dar weydiiyay su’aashaan xeyn saxaabo ahayd oo meel fadhiyay. Isaga ayaa uga jawaabay su’aashoodii, oo wuxuu yiri “haa, waxaad tihiin dadkii uu qur’aanka soo deggay idinkoo nool, waxaadna kala qayb gasheen Rasuulka (scw) dagaallo badan”. Abuu Dar wuu sii waday hadalka, oo wuxuu yiri “war miyeydan aayaddan ku jirin qur’aanka”, isagoo aqriyayna aayaddan “kuwa kaydsada dahabka iyo fiddada oo aan ku bixin waddada Alle ugu bishaareeya cadaab daran, maalinta lagu gubayo hantidaas naarta jahannamo ay ku guban wejiyadooda, dhinacyadooda iyo dhabarkooda, laguna oran kani waa waxaad u kaydsanayseen naftiina ee dhadhamiya waxaad kaydsanayseen ciqaabtiisa”. ( suuradda Al-towbah 34).
Mucaawiye ayaa hadalka qaatay, wuxuuna ku yiri “aayaddan waxaa lagu soo dejiyay ahlul-kitaabka -yahuud iyo kiristaan-”. Abuu Dar ayaa si sare leh kor ugu qaaday codkiisa, isagoo leh “maya, balse waxay ku soo degtay innaga (muslimiinta) iyo ahlul-kitaabka-ba”. Wuu sii watay Abuu Dar hadalkiisa, isagoo nasteexo u soo jeediyay Mucaawiye iyo madaxda la socotoba inay isaga baxaan guryaha ay ku jiraan iyo beeraha ay leeyihiin, iyo inaynan naftooda u kaydsan wax hanti ah wixii maanta ka danbeeya.
Mucaawiye wuxuu u cabsaday xukunkiisa, waxaa cabsi gelisay hadalladii Abuu Dar. Hase ahaatee, dhinaca kale, wuxuu Mucaawiye si fiican u ogaa mudnaanshaha iyo booska uu ka joogo Abuu Dar, sidaa darteed ma uusan u geysan wax dhibaato ah. Laakiin, durbadiiba wuxuu warqad u diray Cusmaan Binu Caffaan Ilaah ha ka raalli noqdee, isagoo ku leh “ninkii Abuu Dar ahaa wuxuu nagu diray dadkii degganaa Shaam”. Waxyar kadib, waxaa Abuu Dar u timid warqad ka socota amiirul-mu’miniinka Cusmaan, isagoo u sheegay inuu ku soo laabto magaallada Madiina.
Waa hubaal inuu Abuu Dar fuliyay dhammaan dardaarankaas wanaagsan ee uu siiyay macalinkii insaaniyadda ee dunidan soo mara. Cali Binu Abii Daalib Ilaah ha ka raalli noqdee ayaa isagoo ka sheekeenaya Abuu Dar yiri “maanta lama arko qof si Alle dartii aan ugu aaba-yeelin mid canaanaya canaantiisa aan ka ahayn Abuu Dar”. Waa hubaal hadalkaas, oo wuxuu si bareero leh ugu nasteexeen jiray madaxda muslimiinta, isagoo aan ka cabsanaynin awoodda ay leeyihiin. Masaakiinta ayuu aad u jeclaan jiray, iyagana ayuu ka mid ahaa. Weligii qofna ma weydiisan maal ama hanti. Amiirka gobolka Shaam ayaa mar u soo diray lacag gaaraysa ilaa 300 diinaar, isagoo ku yiri “lacagtaan danahaaga ugu kaalmayso”. Jawaabtii Abuu Dar waxay ahayd inuu lacagtii ku celiyay amiirkii, isagoo intaas daba dhigayna �amiirka shaam ma wuxuu waayay qof anniga iga tabar daran�.
Abuu Mansuur Al Amriki oo sheegay inuu la soo xiriiray kahor intii uusan isqarxin wiilkii heystay dhalashada dalka Canada Abuu Muscab oo ka hadlay weerarkii xooganaa ee maanta lagu qaaday Garoonka Magaalada Kismaayo Abuu Mansuur Al Amriki oo sheegay in uu geeri uu qarka u saaran yahay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali oo sheegay inaan loo dul qaadan karin wax yaabaha uu sameynaayo Amiirka Al Shabaab Sheekh Al Ansaari oo sheegay in khilaafaadkii ugu darnaa uu soo kala dhex galay Al Shabaab Nolosha Abuu Mansuur Al Amriki oo khatar ku jirta “Daawo Sawirada” Al Shabaab oo sheegtay in shan askari oo kamid ah Ciidamada Amisom ay ku dishay Villa Somalia Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments